Sida loo Hagaajiyo Jeebka Liidh-Suuqgeynta ee jabay | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Sida loo Hagaajiyo Jeebka Liidh-Suuqgeynta ee jabay
Sida loo Hagaajiyo Jeebka Liidh-Suuqgeynta ee jabay
0 Daqiiqado 4 ayaa akhriyay
Waxaad u shaqeysay si adag si aad ugala hadasho ololihii suuqgeyneed ee dhawaa oo aad u beddesho hogaan. Marka tuhmanayaashaadu noqdaan kuwa la filayo oo ugu dambayn gaadhay heerka gooldhalinta, waxaad ku tuuraysaa hogaanka gidaarka maahmaahda iibka si uu u shaqeeyo. Ka dib, waxaad baran doontaa in riixitaanka bilowga ah ka dib, hogaanka suuqgeyneed diiran ay qabowday. Tani waa sababta oo ah iibku wuxuu ka hormariyay liiskooda tigidhada aad u dirtay. Waxaa intaa dheer, iibku ma rabo inaad sameyso wax suuqgeyn ah liiskooda mudnaanta leh sababtoo ah waxaad ka maqan tahay macnaha guud ee xiriirka ay si firfircoon u kobcinayaan. Tani waxay keenaysaa in aanay xogta kula wadaagin.
Goolal qaldan. Dil liidata oo ay ugu wacan tahay isgaarsiin la'aan. La'aanta xogta la wadaago, la isku halayn karo. Waxaas oo dhami waxay ku dhammaatay kalsooni hoose oo u dhaxaysa labada kooxood. Waa tusaaleyn nooca xaalad keeni karta kala qaybsanaan qotodheer oo u dhexeeya iibka iyo suuq-gaynta. Waxayna saamaysaa dakhliga.
Haddaba maxaad qabataa? Aan eegno sida loo hagaajiyo maduunka.
Adeegso istaraatijiyad suuq-geyneed Kooxda Iibka
Sida laga soo xigtay Forrester, 94% B2B go'aannada wax iibsiga waxaa lagu sameeyaa kooxo iibsada ee maaha shakhsiyaad. Isticmaalka habka Suuqgeynta Ku-saleysan Koontada (ABM) ee dhaqameed maalmahan kuma filna. Waa inaad aad u badan tahay si aad u gaadho xaq u xiriirada. Waa inaad aadaa kooxda wax iibsiga.
Suuqgeynta Kooxda Iibka (BGM) waxay diiradda saartaa ka-qaybgalka go'aan-qaadayaasha muhiimka ah ee gudaha akoonnadaada bartilmaameedka ah. Habkani waxa uu ku saabsan yahay in si joogto ah loola socdo dareenka iyo ka qayb qaadashada kooxaha wax gadanaya ee ku jira akoonnadaada bartilmaameedka si loo xalliyo khibradaha suuq-geynta iyo iibka. Tusaale ahaan, xubin kooxeedka iibsashada maaliyadda waxay u badan tahay inuu leeyahay walaacyo ka duwan kan xubinta IT gadashada. Nuxurkaaga, hal-abuurkaaga, iyo keenistaada waa in lagu qaabeeyaa taas.
Iyadoo xalal dhaqameedku aanay noqon kuwo casri ah oo ku filan in si la isku halleyn karo loo garto loogana shaqeeyo kooxaha wax gadanaya, tignoolajiyada cusub ayaa soo baxaya kuwaas oo cabbiraya suurtogalnimada beddelka kooxda. Influ2 Xalka Xayeysiiska Ku-saleysan Qofka waa awood BGM. Xayeysiiska Qofka Ku Salaysan wuxuu kuu ogolaanayaa inaadan qabsan ka qaybgalka iibsadaha ee shakhsi ahaan iyo heerka kooxeed iibsashada. Dhibcuhu waxay muujinayaan sida ay u bislaadeen shakhsiyaadka wacyigelinta. Xogtan ayaa markaa lagu hawlgelin karaa iyada oo loo maro marinka iyo qulqulka shaqada ee jira iyada oo loo marayo aaladaha sida Salesforce, HubSpot, Marketo, iyo Outreach. Tani waxay u oggolaanaysaa suuq-geynta inay ogeysiiyaan iibka ku saabsan waxqabadka ka-qaybgalka ee xiriirada ay aadka u daneeyaan.
Ka fakar MQL
Nolosha hogaanka, Suuqgeynta Qualified Lead (MQL) waa sida caadiga ah isku xirka meesha 'lahaanshaha' ay uga gudubto gacmaha suuq-geynta una gudubto gacmaha iibka. Suuqgeynta iyo iibinta waxay inta badan si madaxbanaan u shaqeeyaan labada dhinac ee gidaarka MQL.
Suuqgeyntu waxay ka saartaa shabagga saafiga ah badda rajooyinka suurtagalka ah. Iibka ayaa cidhiidhi ku socda, isagoo wax ka qabanaya baahiyo gaar ah iyo badhamada kulul ee shakhsiyaadka. Marka hoggaanku u qalmo suuqgeyn, wuxuu ka gudbaa adduun ilaa kan xiga-ballaaran ilaa cidhiidhi.
Haddii MQL uu yahay KPI-da ugu weyn ee aad uga warbixiso suuqgeyn ahaan, kuma filna. Bal qiyaas adduun ay iibka iyo suuqgeyntu ka wada shaqayn karaan inta lagu jiro wareegga nolosha ee hoggaanka - laga bilaabo wacyiga bilowga ah ilaa heshiis xidhan. Ka takhalusidda MQL waxay midaynaysaa madluuqa hal safar oo iibsadaha ah halkaas oo hawlaha iibka iyo suuqgeyntu aysan ahayn fikrado kala duwan balse waa dadaal si wanaagsan loo agaasimay oo lagu beegsanayo dhammaan kooxda wax iibsiga. Waxay u isticmaashaa dhammaan agabka ku jira sanduuqa qalabka iyada oo si sax ah loo qalayo. Dadaal dhamaystiran oo sidan oo kale ah waxay diiradda saaraan khibradda iibsadaha. Dhibcaha Ka-qaybgalka Kooxda Iibka ayaa ah cabbir la wadaago iibka iyo suuq-geynta taasoo caawin karta in si wanaagsan la isu waafajiyo kooxaha oo ay bixiso aragti qiimo leh si loogu riixo dhammaan akoonnada illaa dhammaadka.
Xogtayadu waxay muujinaysaa in kooxaha wax-iibsiga ee ku hawlan ay helaan ku dhawaad ​​2.5x kor u kaca heerarka beddelka marka loo eego kooxaha wax iibsiga ee aan ku hawlanayn. Suuqgeynta ka dhalata ka-qaybgalka heerka horumarinta iibku waa mid aan qiimo lahayn. Dhab ahaantii, mid ka mid ah macaamiisheena kuwaas oo bartilmaameedsaday xayeysiisyada iibsashada kooxaha xitaa qoto dheer ee maduunka ayaa natiijooyin fiican helay. Kooxaha wax gadashada ee ku hawlan xayaysiiskooda 'marxaladda demo' waxay lahaayeen koror 1.5x beddelaad ah iyo 'marxaladda qiimaynta' waxay lahaayeen koror 2x beddelka ah.
Tani waa hab cusub oo shaqo!
Kooxaha iibka iyo suuqgeynta oo wada shaqeynaya
Shirkado badan suuqgeyntooda iyo toosinta iibku waxay ku bilowdaan kuna dhamaadaan shir wadajir ah si loo qeexo Profile Macmiil Ideal (ICP) si kooxuhu u beegsadaan rajada saxda ah. Iyadoo BGM ay u baahan tahay iibka iyo suuqgeyn la iska kaashado iyada oo loo marayo marinka oo dhan, sidoo kale waxa si gaar ah farriimaha muhiimka ah la jaan qaadaya marxalad kasta oo safarka ah.
MQL la'aanteed, kooxda horumarinta iibka waxay mudnaan siin karaan ka qaybgalka kooxda wax iibsiga si ay u qabtaan wadahadalo diiran. Laakiin maskaxda ku hay in iyada oo mudnaanta la siinayo iibsashada ka-qaybgalka kooxeed, ka-qaybgal kasta oo dadaal suuqgeyneed ah ayaa calaamad u ah xiisaha. Haddii bartilmaameedku uu gujiyo xayeysiiskaaga, waxaa jira xiiso, markaa dadka wax iibinaya waa inay ka warqabaan gujin kasta.
Marka la eego heerka sare, wada shaqaynta waxaa ka mid ah:
Istaraatiijiyad ku toosan, daboolaya meelaha ay ka midka yihiin iibsashada qaab-dhismeedka kooxda iyo hababka, dadka, shakhsiyaynta, iyo gaarnimada.
Abuuritaanka waayo-aragnimo ku habboon: laga bilaabo koobi ilaa hal-abuur laga bilaabo wacyi-gelinta ilaa heshiisyada xidhan, farsamaynta khibradaha iibsadaha si loo gaadho rajada shakhsi ahaan ee aan ahayn nooc.
Qiyaasta la wadaago: isku toosinta suuq-geynta iyo cabbirka iibka si loo dhammeeyo natiijooyinka iyo midba midka kale.
Dhammaadka, hagaajinta marinka suuq-geynta-iibka ee jabay waxay wadi doontaa hab shaqo oo ka duwan.
Waxay u baahan doontaa habayn aad u dhow oo dhaqdhaqaaqyo iyada oo loo marayo marinka, mid qof kastaa uu leeyahay faham cad iyo heshiis ku saabsan istiraatijiyadda, dhagaystayaasha la beegsanayo, iyo astaanta macaamiisha ugu habboon. Mid ka mid ah meelaha si hawl-gal ah, nidaamyadaagu waxay la jaan qaadayaan istiraatiijiyaddaada si xogtu u socoto. Waa inaad qeexdaa noocyada xogta muhiimka u ah ganacsigaaga iyo qaybaha nidaamka aad otomaatig u noqon karto. Oo waa inaad lahaataa xidhiidh joogto ah oo u dhexeeya kooxaha iibka iyo suuq-geynta si aad u hubiso inaad si taxadar leh u naqshadayso oo aad u maamusho agagaarka safarka, adoo gelinaya macaamilka halka ay tahay - bartamaha.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato sida loo hirgeliyo istaraatiijiyad suuqgeyn kooxeed, fadlan nala soo xiriir.
SEO ee Noocyada Adeegyada Maaliyadeed: Isbeddellada Muhiimka ah & Fursadaha Raadinta
12 Tusaalooyinka Calaamadaha Metaverse
Webinar: U shaqee si caqli badan, ha ka sii adkaan, si aad u siiso macaamiisha waxa ay rabaan
Webinar: Ku kori qulqulka dakhliga iyada oo loo marayo gelitaanka shabakadda iyo u hoggaansanaanta
Maalmood ka hor 5
30 hay'adood ayaa sameeyay koox cusub si ay u taageeraan xuquuqda taranka
Maalmood ka hor 6
21 siyaabood oo aad ku ilaalin karto kooxdaada suuqgeyneed mid waxtar leh
Abuur saamaynta ololaha adiga oo gaadhaya Macaamilka Maalinta Shaqada
Tijaabada Twitter Notes, oo ah muuqaal qaab-dheer leh
Naqshadda Google News ee dib loo habeeyey waxa ay la socotaa sheekooyinka ugu sarreeya, wararka gudaha iyo maqaallada la gaaryeelay
U wad waxqabadka iyo khibradaha macaamiisha dhijitaalka ah ee ka sii wanaagsan
Spotify waxay ballan-qaadday inay bedqabka summadaha podcasts-ka
Waa maxay Beddelka rasaasta iyo sida loo dhiso Xeelad guulaysata?
20ka ugu Fiican Xubinnimada WordPress Plugins
25 Erayada SEO si aad u tirtirto, ku darsato, ama dib ugu fiirsato Web3 Era
Xirmada joogtada ah ee kooxda Odyssey, ee ku saleysan Zhang's PoC, waxay calaameysaa Taurine jailbreak app si aan xad lahayn
saac ka hor 9
Jail jabinta toddobaadka: TimeJump, YTNoPaidPromo, & in ka badan…
saac ka hor 10
Hagaha Algorithms-ka Baraha Bulshada & Siday U Shaqeeyaan
Content Suuq 701
Webinar: Ka gudub qaraxa istaraatiijiyadan heerka xigta ee iimaylka
Xalka gacmeed ee khibradaha dhijitaalka ah ee xoogga leh
Shanta koorso ee suuqgeynta dhijitaalka ah ee ugu sarreeya Mareykanka
Webinar: Hab-dhismeedka ABM si fudud loo isticmaali karo (ugu dambayn!)
SafeOpt by AddShoppers waxay sii wadaa kobaca degdega ah waxayna raadisaa xubnaha cusub ee kooxda
NP Digital waxa ay heshaa qalab cilmi baadhiseed kelmad furaha AnswerThePublic
Waxaa laga yaabaa 30, 2022
9 ka mid ah Mareegaha Madaxbanaan ee ugu Wanaagsan ee Shaqooyinka
Waxaa laga yaabaa 27, 2022
3 xeelado suuqgeyneed nuxur si ay u taageeraan guusha SEO
Waxaa laga yaabaa 25, 2022
U qaado martigelinta webka ilaa xadka (NVMe).
4 walxood oo ka kooban waxyaabo wanaagsan, marka loo eego cilmi baarista Google
Chrome wuxuu ku tusi doonaa natiijooyinka Lens-ka Google ee isla tab browserka
Waxaa laga yaabaa 23, 2022
Google News naqshad cusub ayaa la tijaabinayaa
Waxaa laga yaabaa 19, 2022
Google waxa ay soo saartaa qalab caafimaad oo muuqaal ah si ay u caawiso lacagta daabacaha
Webinar: Ku beddel hawlahaaga macluumaadka DAM
Sida Loogu Daro Macluumaadka Isticmaaluhu Soo Saaray Istaraatiijiyada Suuqgeynta Dijital ah
Maxay yihiin sirtaada si aad uga gudubto caqabadaha suuqgeyneed? Qaado sahankayaga
Waa maxay SEO (Hurrinta Matoorka Raadinta): Hagaha Dhamaystiran ee Lagu Gaadho Natiijooyinka Sare ee Google
Waxaa laga yaabaa 16, 2022
Istaraatiijiyada suuq-geynta nuxurka ee ganacsiyada yaryar: 11ka talo ee ugu sarreeya
Weli ma lihid ammaan suuqgeyn?
Sida loo hago: Abuur SEO waara, wax qabad sare leh iyo istiraatiijiyad ka kooban
Maamulaha guud oo ka hadlaya caafimaadka dhimirka
BlueConic ayaa u magacaabay hogaamiye IDC MarketScape CDP Iibiyaha Qiimaynta
Google waxay siisaa $100,000 oo tababar ah shirkadaha Maraykanka
Waxaad xiisaynaysaa ABM laakiin maxay ku kacaysaa?
5 Qodob oo Samayn doona ama Jebin doona Xeeladaha Suuqgeynta Macluumaadkaaga
5 siyaabood oo kor loogu qaado liisaska caajiska ah
Kala saarida fikradaha khaldan ee aaladaha khibradaha dhijitaalka ah
Talaabooyinka la xaqiijiyay ee lagu bilaabayo ABM
Ka saar caqabadaha oo dib u qiyaas wada shaqaynta Iscasilaadii Wayn ka dib
Isbeddellada 2022 ee suuqgeynta dhijitaalka ah
Diyaar ma u tahay inaad booqashooyinka mareegaha lacag u rogaan? La kulan beddelaad joogto ah
Waa maxay sababta xisbiga kowaad iyo eber-xisbiga xogta ay tahay inay noqdaan mudnaanta suuqgeyneed
Suuqgeeyayaasha Astaantu ma ka faa'iidaysan karaan Metaverse?
10 Talooyin Naqshad Shabakad oo Waxtar Leh oo ay taageerto Cilmi-baarista
Casharrada ku jira Suuqgeynta Kooxda Iibka - Barashada qoob ka ciyaarka kooxdaada iibka
Hoggaaminta suuqgeynta: 4 cashar oo laga bartay adeegga ciidanka
3 siyaabood oo ay suuqgeynayaashu ula xiriiri karaan macaamiisha Gen Z
8 emaylka ugu wanaagsan ee dhaqamada 2022 si kor loogu qaado
Waa maxay sababta shakhsiyaynta wakhtiga-dhabta ah u horseeda daacadnimada iyo kobaca miisaanka
Awoodsiinta tignoolajiyada, oo lagu kala soocayo bini'aadantinimada